Soo -saaraha iyo Bixiyaha Aluminium Aluminium Aluminium Ah Ruiyi
Saxanka aluminium ee qaabku sidoo kale waa nooc ka mid ah walxaha birta ah, waxayna u baahan tahay in lagu ilaaliyo hababka sayniska ee hawlgalka maalin kasta. Dusha sare ee liiska, nadiifinta joogtada ah, wasakhda dibedda waa in lagu nadiifiyo biyo ama ka -saaraha u dhigma. Haraaga wasakhda ayaa si fudud u samaysan doona xaashida daxalka.
Iibinta kulul Qiimaha hoose Aluminium Alloy Plate Description
In kasta oo astaanta aluminium ee saxanka aluminiumku leeyahay faa'iidooyin badan, qiimaha astaanta aluminiumku wuu ka sarreeyaa alaabooyinka kale. Saxanka aluminiumka ayaa u sahlan in uu “mirro” iyada oo aan la oksaydhin, taas oo keenta hoos u dhaca wax -soo -saarka badeecada, oo xooguna ka hooseeyo kan alaabta birta, iyo iska caabbinta xirashada lakabka oksaydhka ayaa ka hooseeya tan dahaadhay dahaadhka iyo kharashkuba waa badan yahay
Saxanka aluminiumka caadiga ah ee saxan aluminium: ku habboon bay'ada maalinlaha ah, qiimuhu waa dhexdhexaad. Badanaa waxaa loo isticmaalaa kaydinta qabow, sagxadda dhulka, baakadaha iyo meelo kale.
Aluminium aluminium aluminium saxan aluminium: oo lagu magacaabo saxan aluminium miridhku, xoogaa xoogaa wuu ka sarreeyaa saxanka aluminiumka ah ee aluminiumka caadiga ah, oo leh iska caabin miridhku, laakiin iska caabbinta daxalka iyo adkaanta ayaa liidata, maxaa yeelay saxanka aluminium ee wax soo saarka ayaa loo adeegsadaa difaaca Miridhku ma aha mid adag, sida moodooyinka xamuulka, dabaqyada kaydinta qabow iwm.
Aluminium-magnesium alloy aluminium saxan aluminium: Waxay leedahay adayg aad u fiican, iska caabinta daxalka iyo iska caabinta miridhku. Caadi ahaan waxaa loo adeegsadaa meelo gaar ah oo dheeraad ah, sida maraakiibta iyo bay'ada qoyan, saxankan aluminiumka ahi wuxuu leeyahay awood xambaarsan culeys gaar ahaaneed iyo adkaansho sare.
Hore: Iibinta kulul 8011 Aluminium
Xiga: Soo -saareyaasha Waraaqaha Saxanka ee Aluminium -ka ee Shiinaha ah
7 Aluminium Tread Plate
Aluminium Tread Plate 4x8
Aluminium Tread Sheets Plate
Madow Aluminium Tread Plate
Aluminium Aluminium Tread Plate
Brite Tread Aluminium
Waraaqaha Aluminium ee Tread Diamond
Alwaax Aluminium Tread Plate
Tumid ​​Sheet Aluminium
Premium Shiinaha Aluminum Shell Plate Plate Checkered ...
Resistance Sare Daxalka 6061 T6 Aluminum T ...